Etazonia: Manahy Amin’ny Fifandraisan’i Armenia Sy Iràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2017 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, فارسی, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoakatamin'ny Jona 2007)
“Mieritreritra ny hampiasa vola betsaka amin'ny toekaren'i Zeorzia sy Armenia i Iràna. Iray lavitrisa dolara amerkàna no resaka eto, ho an'i Tbilissi, ary mitovitovy amin'izay koa ho an'i Erevan. Ho fampahafantarana anao : tamin'ny 2006, tsy nihoatra ny 30 tapitrisa dolara amerikana ny fampiasambola nataon'i Rosia tao Zeorzia. Ary raha momba an'i Armenia, taorian'ireo dingana nataon'i Vladimir Poutine dia niakatra ho 1,5 lavitrisa dolara. Raha tafapetraka io tetikasa fampidirana renivola io, dia Iràna no ho lasa mpampiasa vola betsaka indrindra hanana ny dindony any amin'ny faritra atsimon'i Kaokazy » hoy i Kornelij Glas [Ros], taorian”ireo tatitra milaza hoe niteraka ahiahy ho an'i Etazonia ireo fifanarahana nifanaovan'ì Armenia tamin'i Iràna.
Rehefa nandalina ny toedraharaha, amin'izay mampanahy ny diplaomaty amerikana iray mitàna toerana ambony, momba ireo fifandraisana ara-toekarena mitombo hatrany eo amin'i Armenia sy Iràna mpiray vodirindrina aminy, izay mety ho vahaolana manoloana ireo sazy iraisampirenena apetraka amin'i Iràna noho ilay fandaharanasa nokleary miteraka resabe ataony, dia izao no hevitry ny Armenia Blog [An] ::
« Mpifanolo-bodirindrina amintsika hatry ny ela i Iràna ary raha maniry ny hisian'ny tohana misimisy kokoa amin'ireo hetsika ataony i Etazonia, angamba tombom-panampiana iray monja atao amin'i Armenia dia mety hahatohitra ny mety ho fatiantoka ateraky ny fahatapahan'ireo fifandraisana taminà firenena iray sakaiza. Mbola amin'izay ihany, raha misy fifandirana mitranga any aoriana, i Rosia sy Iràna no tena ho mpifanome tànana amin'i Armenia, ary mety tsy hisy ilàna azy ny hiantehitra amin'i Etazonia mba hiaro ny tombontsoantsika ».
Karohan'i Nazarian [An] izay handalinana ny toeran'i Armenia ao anatin'ny fanontoloana, manoloana ilay fotokevitra « tany marindrano » novolavolain'i Thomas Friedman .
« Manontany tena hatrany aho momba ny andraikitr'i Armenia sy ny fandraisany anjara amin'ny toekarena erantany. Tsena kely io. Tanàna kely tsy misy afa-tsy mponina iray tapitrisa i Erevan. Misy betsaka ireo tanàna manana io habe io eran'izao tontolo izao. Ampio amin'izany ny hoe ny saranga antontonony dia ampahany kely monja amin'ny vahoaka, ireo hany afaka manana endri-piainana manahaka ny tandrefana, ary dia ho hitanareo ny antony mahatonga ireo orinasa maro rantsana avy any ivelany tsy ho liana hanana masoivoho ofisialy ao Armenia, indrindra moa fa hoe hametraka orinasa mpamokatra ao an-toerana ».
Ny Notes from Hairenik [An] aza mbola manahy misimisy kokoa momba ny toekarena armeniàna, na mitohy tsy miato aza ny fitomboany, izay miantoka salanisam-pitomboana maherin'ny 10% amin'ny harinkarena faobe ao an-toerana nanomboka tamin'ny faran'ny taona 90. Hoy ny famoahana nataon'ny ArmeniaLiberty.org tamin'ny 19 Jona 2007 hoe ireo fampitam-baovao avy amin'ny Banky Eoropeana ho an'ny Fanarenana sy Fampandrosoana (BERD) no ianteherany amin'ny fanomezana lanja indray ny dram, vola armeniàna, sy ireo vokatra mampihoron-koditra ho aterak'izany amin'ny toekarena, na ho ela, na ho haingana.
« Nofintiniko avy amin'izany, fa na milaza aza aho hoe tsy mpahay toekarena velively, dia mifototra amin'ny dolara amerikàna ny toekarena armeniàna, ary mety ho toy izany hatrizay. Na ifanakalozana eny an-dalambe aza ny dram, mbola ny dolara no ao an-tsain'ny olona mandrakariva ary vidin-javatra navadika ho dolara no ao an'eritreriny. Mitohy miraraka ireo fandefasana vola avy amin'ireo Armeniàana any ivelany ho an'ny fianakavian'izy ireo, saingy tsy mihodina iny vola iny. Ny tsy fisiana dolara eny amin'ny tsena dia marika iray mazava fa misy zavatra tena diso tanteraka eto. Tsy ho gaga mihitsy aho raha toa i Armenia, enga anie Andriamanitra ka tsy ho izany, ka hahita afaka fotoana fohy ny fikorotsahan'ny « firoboroboana tampoky ny toekareny ». Raha ny marina, miandry an'izay aho. »
Tsy be fanahiana toy izany daholo akory ireo Armeniàna bilaogera, kanefa, zendana tamin'ireo fiovàna nalaky be hitany tao amin'ny seranam-piaramanidina sy tany afovoan-tanànan'i Erevan renivohitra i Levon [An] raha vantany tafaverina tao Armenia rehefa niaina taona roa tany ivelany. Narjan [En] mamoaka ampahany avy aminà lahatsoratra iray an'ny masoivohom-baovao Reuters momba “ilay Armenia kely”, mpitarika erantany amin'ny resaka fiarakodia mandeha amin'ny entona natoraly.
Na any aminà “firenena kely” iray aza, mba te-hiaina finaritra ny olona, saingy noho ireo tsindry iraisam-pirenena rehetra mianjady amin'i Armenia, rehefa ireo goavana toa an'i Etazonia, Rosia, Eoropa ary Iràna no miady tombontsoa hanamafy ny toerany ao amin'ity faritra tena stratejika ity, tsy misy azontsika atao, afa-tsy ny mijery ny firenentsika hozongozonina miankavia miankavanana… raha tsy hoe misy zavatra tokony hatao angaha?